Kuboshwe isoka ngesidumbu eZinketheni | News24
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaIsibaya lapho kwatholakala khona isidumbu sika Nks Mathonsi.
SEKUBOSHWE isoka ngemuva kokutholakala kwesidumbu sowesifazane sigqitshwe esibayeni sezimbuzi eZinketheni.
Isidumbu sikaNks Fahlazane Glady’s Mathonsi (54) satholwa sinqunu sigqitshwe esibayeni ngoMgqibelo mhla zingama-24 kuNdasa (March) emzini wesoka ayehlala nalo.
Kwase kuphele isikhathi esingaphezu kwesonto UNks Mathonsi elahlekile.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini i-Mountain Rise uKapteni Gay Ebrahim ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa abophe abasolwa ababili okubalwa khona nesoka lakhe uNks Mathonsi.
“Kuboshwe abalisa abaneminyaka ephakathi kwengama-72 kanye noneminyaka engama-32 ngecala lokubulala uNks Mathonsi. UNks Mathonsi kusolwa ukuthi waklinywa waze washona, isidumbu sakhe sabe sesithelwa ngo-paraffin sashiswa ngaphambi kokuba sigqitshwe,” kubeka uKapteni Ebrahims.
Umphakathi wakulendawo uthi usashaqekile ngokuvela kwezindaba zokuboshwa kwesoka likaNks Mathonsi.
“Umuntu omdala kangaka angayenziswa yini into enjena? Uma kungukuthi bebexabene bebengahlalisana phansi bayixoxe lento besingekho isidingo sokuthi aze ambulale. Waze wazehlisa isithunzi njengoba lo muntu aziwa njengomuntu ozithulelayo nje endaweni, bese kuvele ukuthi wenze into enje? Impela ungabomethemba umuntu,” kusho elinye ilungu lomphakathi elingathandanga ukudalulwe igama lalo.
Elinye ilungu lomphakathi nalo elingathandanga ukudalulwe igama lalo lithe ukuboshwa kwesoka lika Nks Mathonsi akulethusanga.
“Ukuthi angabi khona ngesikhathi kufunwa umuntu akade ethandana naye futhi behlala naye endlini eyodwa bekusolisa nje ukuthi kukhona akwaziyo. Uma kungukuthi uyenzile ngempela lento kufanele abhadle ejele akayena umuntu wokuhlala emphakathini uma ekwazi ukubulala ngesihluku esingaka,” kubeka lona.